Okumele ukwazi ngohlelo olusha lukaMinnie Dlamini | isiZulu
Kuzungeza athi uMinnie uzojoyina iSupersport
Usethi khumu ekushayeleni uhlelo lwezemidlalo iSoccerZone
VIDEO: Usaziwayo uthengele abazali bakhe i-BMW
Cape Town – Osaziwayo abangabethuli bezinhlelo zikamabonakude, uMinnie Dlamini kanye noLungile Radu, bazokwethula uhlelo olusha lwezokujabulisa nolukhombisa ngendlela yokuphila luphinde lufake nezemidlalo.
Lolu hlelo oluzobe lusakazwa bukhoma, iHomeground, ludidiyelwa ngokuhlanganyela yiziteshi zikamabonakude esitholakala kuDStv, okuyiSuperSport kanye neMzansi Magic.
OLUNYE UDABA: Sekuputshuke imiyalezo kaBonang egxeka uMinnie Dlamini
OyiHead of Entertainment kwa-M-Net, uSphumelele Sibeko, uthi: “Ngosizo lukaSuperSport, sesihlahla indlela entsha ngokudidiyelwa kwezemidlalo bukhoma, kodwa siyakuhlanganisa nezobumnandi ezishisayo, nokuyinto ababukeli bethu abeze ukuzoyilindela kuthina.”
Nakhu okumele ukwazi ngalolu hlelo
Lolu hlelo oluzodlala masonto onke luzonikeza abalandeli izindaba zezemidlalo, imininingwane, izingxoxo nosaziwayo, lubandakanye nezinkundla zezokuxhumana, bese luphinde luthinta nendlela yokuphila.
Nini futhi kuphi:
Lolu hlelo luzosakazwa ngesikhathi esifanayo kuMzansi Magic (DStv 161) kanye noSuperSport 4 (DStv 204 ) ngo-21:30 kusihlwa.
Ephawula ngalolu hlelo olusha uMinnie Dlamini, uthe into ayithanda kakhulu ngalo ukuthi luxube izinhlobo eziningi zezemidlalo – hhayi nje ibhola lezinyawo kuphela. Uphinde wathi lolu hlelo luyinkundla enkulu yezikaqedisizingu.